EyeThupha 7, 2018 admin
Umzuzwana ukulibaziseka isigqibo ETF Bitcoin ukuya kuSeptemba
I-US Securities and Exchange Commission ibambezele isigqibo kwi Bitcoin ETF ecetywayo, eliqhubela ukuzimisela yayo yokugqibela phambili yi ngenyanga ngaphezu kokuba. Xa umyalelo ishicilelwe ku Agasti 7, amagosa e-arhente wabhala ukuba Baye ke bona ixesha elininzi ixoxe ukuba niyivume kuya kubakho imveliso Exchange-wasebenza okokuqala ngqa kwi US.
Kwakhona mhlawumbi akumangalisi, siyanikezelwa ukuba ngaphambili, Amagosa umzuzwana baye basebenzisa amagunya-Arhente zomthetho yokutyhiliza izigqibo Bitcoin ETFs.
ibhanki Swiss Maerki inika iinkonzo kwimizimveliso cryptocurrency
bank yabucala Zurich-based Maerki Baumann ivumile ukuba ukwakha zebhanki ngentsebenziswano mveliso cryptocurrency, ekusombululeni indawo iintlungu kwiinkampani asebenza kule industry. ngaphambili, amanye amaziko Zurich Falcon Private Bank yaba liphezulu-neenkonzo zenkcukacha umnikelo ibhanki Swiss ukuba blockchain iinkampani.
Ngokungafaniyo Ukhozi, Maerki Baumann ayikho ngoku baceba ukuba zinikezele ngolawulo cryptocurrency asethi okanye oluselugcinweni iinkonzo. Kutshanje Ibhanki ipapashe ingxelo cryptocurrencies apho wathi kuwo "ngokugcina iliso" kule klasi asethi. Kuloo ngxelo: "Maerki Baumann Ogcina iliso kuphuhliso ezi bezixhobo zotyalo-mali kunye nenkqubela ehambelana kwicala lolawulo… Maerki Baumann ukulungele ngokubanzi ukwamkela mali ngokusebenzisa cryptocurrencies, ngayo ngokusebenzisa iintengiselwano kwerandi okanye uhlobo lwentlawulo efunyenweyo yeenkonzo ezinikezelwa okanye inzuzo imigodi.”
ibhanki Spanish central usekela cryptocurrencies kwingxelo entsha
central yebhanki Spain kaThixo, Banco de Espana, likhuphe ingxelo echaza ukuba kusetyenziswe ezimali digital, ingakumbi xa kukho inguqulelo digital ye lwemali karhulumente, iza kuphucula umgaqo wolawulo-mali yelizwe. Ithi ukuba nemali digital akwazi ukunceda ekuphuculeni izibonelelo ezikhoyo zemali yesizwe.
Director General for Economy e BDE, Galo nuno, uthe ukusetyenziswa cryptocurrencies enokuba nempembelelo entle kwezoqoqosho. Olu xwebhu kwakhona icebisa ukuba ibhanki engundoqo ijolise blockchain, oku kuya kunceda ukulawula inzala kunye supply imali ngcono.
Coinbase uyaqhubeka Bitcoin ukuthenga nokuthengisa e Wyoming emva ukufumana imvume yokulawulwa
Coinbase linika iinkonzo abahlali abahlala US isimo Wyoming kwakhona, emva kokuba ngokutsha ilayisenisi yayo imali samaza e Wyoming, uphawu imbuyekezo elide-Walinda ukususela zivele Coinbase umthi kurhulumente kwiminyaka emithathu edlulileyo. Coinbase Sibhengeze ngoJuni 2015 ukuba kwakuza kuba ziindleko yaye ayiloncedo ukuqhubeka iinkonzo zayo e Wyoming emva nabalawuli karhulumente wacacisa inkampani yawa phantsi Money Gazi Act.
Lo Mthetho kufuneka ngexesha Coinbase kumele “reserve double” abahlali karhulumente’ asethi - intsingiselo ubambe oovimba eyake lwemali zonke ii-asethi crypto egcinwe egameni yomxumi - ukuze ukuvuselela ilayisenisi imali samaza. kunjalo, i cowboy State yamisa umthetho langutana ngoMatshi kulo nyaka liyilungisile Imali Gazi Act ukunikezela yokuxolelwa ekufundeni imali ebonakalayo “Iinkampani cryptocurrency e Wyoming engasekho kufuneka ukuba kabini ukugcina impahla abahlali karhulumente.”
West Virginia inikeza counties mobile blockchain yokuvota
Amagosa e West Virginia Uhambisa app blockchain-based okuvota mobile kubo bonke 55 counties zikarhulumente nengqungquthela ejoliswe ukuvumela abavoti abangekhoyo emkhosini ukuba bavotele ukude kulonyulo midterm. Urhulumente injini le app blockchain ngoMeyi olwaluvumela ukuba kuqashwe abasebenzi zomkhosi kunye nabaxhomekeke kubo ukuba bavotele kunyulo lokuqala.
Lokusebenza phambili kwaye zisasazwa kwezobuchwepheshe yokuvota kuqaliso Voatz, leyo wathi buqonda obuchwepheshe kunye noovimba data ze bavotela kusetyenziswa uthungelwano amagunya ngenjongo ukuqinisekisa ingcaciso ukuvota khowudi kwaye kwenziwa ngakumbi ngokukhawuleza. ukuba uthe, Warner kaThixo amasekela-bamakishi abaziintloko abasebenzi Michael Queen uthe urhulumente uza kushiya isigqibo sokugqibela counties ngamnye enoba baza kusebenzisa anobuchwepheshe lutsha.
Report: nokuphakwa Blockchain ukugcina iibhanki phezu $ 27B ngonyaka 2030
Uphononongo olwenziwe yi ubuchule ngokuqinileyo wejunipha Uphando lubonisa ukuba ekunabiseni ubuchwepheshe blockchain, amaziko ezemali eme ukwenza imali imali ngaphezu $27 billion kwemicimbi zokuhlala cross-umda ngu 2030. Ngokusekelwe kwi-chain kwiintengiselwano, iindleko ziza kuncitshiswa yi phezu 11%.
Le ngxelo obizwa “I-Future of Blockchain: Amathuba Key nkqo & Izicwangciso zokuxhasa 2018-2030” iingxelo iibhanki ezimanyama blockchain uya ukufikelela unciphiso iindleko hayi nje processing intlawulo kunye noxolelwaniso, kodwa imisebenzi kanondyebo kunye nokuthotyelwa. kwakhona, uphando entsha ezichongiweyo mali amathuba kwabathengi kunye namashishini kuluhlu lwamashishini, mali yancitshiswa ngenxa abathengi ekhaya neendleko reduced yorhwebo lokutya kumazwe angaphandle.
Trump nomcebisi YAKHE Iifayile નવો ...